सांसद पासवानको ब्यंग्य : प्याज खानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ ! | Kendrabindu Nepal Online News
८ पुष २०७६, मंगलवार ०८:३८
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्याजमा भइरहेको अनियन्‍त्रित मूल्यवृद्धिलाई लिएर सांसदले ब्यंग्य गरेका छन् ।
सांसद रामपृत पासवानले प्याजमा भइरहेको मूल्यवृद्धिमा ब्यंग्य गर्दै भने, अब प्याज खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर जनहितमा एउटा सूचना जारी गर्नुपर्‍यो। उनले मूल्यवृद्धि नियन्‍त्रण गर्न सरकार असफल भएको बताए।
उनले भने, त्यो लेख्नुबाहेक हामीसँग केही विकल्प रहेन। नेपाली जनता प्याज खानसक्ने अवस्थाका भएनन् । प्याजको मूल्य आकाशिएको छ। प्रतिकेजी २ सयभन्दा बढी प्याजको मूल्य छ यहाँ। अब नेपाली जनता प्याज किन्न सक्ने अवस्थाका पनि छैनन्। त्यसैले त्यो सूचना जारी गरिदियो भने चित्त बुझाउछन् जस्तो लाग्छ।’
उनले जनता महंगीको मारमा पर्दा सरकार मस्तीमा रमाएको बताए। ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महंगी बढेको छ। जनता केही किन्न नसकेर त्राहीमाम छन्। उनले भने ‘अनि सम्वृद्धि आयो भनेर के मा स्वाङ गर्दैछ सरकार ? नाक फुलाउने अवस्था त म देख्दिनँ।’
प्याज, सांसद पासवान
Prevकर्णालीका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण शुरु
लण्डनमा महत्वपूर्ण विषय उठाएको छु : मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठNext